"Waligay Ma Cafin Doono" - Romelu Lukaku Oo Calool-xumo U Haya Tababare Si Xun Ula Dhaqmay | Laacibnet.net
“Waligay Ma Cafin Doono” – Romelu Lukaku Oo Calool-xumo U Haya Tababare Si Xun Ula Dhaqmay
Weeraryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku ayaa sheegay in aanu waligii cafin doonin tababaraha reer Portugal ee Andre Villas-Boss oo sannadkii 2012 ka reebay safka kooxda Chelsea ee ku guuleystay Champions League.
Villas-Boss ayaa ahaa tababarihii Lukaku kala soo saxeexday kooxda reer Belgium ee Anderlecht isaga oo 19 jir ah August 2011, laakiin laacibkan ayaan wax ciyaar ah u safanin Blues illaa laga soo gaadhayay May 2012, waxaana waqtigaasi ay ahayd xilligii laga caydhiyey Villa-Boss shaqada Chelsea ee lagu beddelay Roberto di Matteo.
Laakiin cuqdadda Lukaku waxa keenay in tababare Villas-Boas uu gebi ahaanba liiska ciyaartoyda Chelsea ee ka qayb-gelaysa Champions League sannadkaas uu ka reebtay, taasina ka hor joogsatay inuu damaashaadkii Munich kaga qayb-galo.
Romelu Lukaku oo arrintaas dib usoo xasuustay ayaa waxa uu yidhi: “Di Matteo wuxuu ii sheegay inaan kooxda la joogi doono illaa finalka kaddib. Wuxuu ka fikirayay inuu qof walba uu ka mid ahaado, xataa aniga oo ka xayirnaa iyo kuwa aan liiska Champions League ku jirin. Waanan uga mahad-celinayaa taas.
“Guushani waxay ka mid ahayd waxyaabaha aan waligay ku jiroon jiray. Waxaad doonaysaa inaad u dabbaal-degto guul noocaas ah oo aad kooxda la qaaddo xilligaas. Taasi waliba waxay usii fiican tahay da’da 19 jirka, laakiin waxa jiray nin wax badan iga qaatay – tababarihii hore. Waligay kama cafin doono taas.”
Lukaku waxa uu sheegay in Villas-Boas uu ka ciyaarsiiyey dhinaca bidix ee weerarka oo aan ahayn halkii uu caayiyan ka dheeli jiray, laakiin markii uu Di Matteo yimid uu si ka duwan ula dhaqmay, wax kastana ka qayb=geliyey.